Famokarana vatokely sy vatosokoka - Shinoa Pebble & gravel mpamatsy sy orinasa ny mpamatsy vy
Luminescent Gravel Irregular luminescent vato
vatosoa manjelanjelatra marevaka, ampiasaina amin'ny marbra voajanahary, Selidstone artifisialy, terrazzo, disk aquarium, bonsai, dobo filomanosana, haingon-trano, sns.
Mamirapiratra amin'ny maizina Pobbles Photobuminescent cobblestone (glazed, flate form of pebble) Endri-javatra: Smart flate pebble endrika misy tarehimarika lava aorian'izay dia mamirapiratra mamirapiratra ao anaty maizina sy mihary mamirapiratra ao anaty maizina isan-karazany ny loko mamirapiratra: mavo-maitso, manga-maitso lanitra-manga sns Mahatalanjona andro loko miloko fotsy, mavo, maitso, manga, mavo sns. Fotoana lava-jiro haingana kokoa: mihoatra ny 8 ora Ho an'ny fanomezana fampandrosana fonosana: karatra misy lohateny na kitapo FOY na fanao tsy misy poizina, tsy manimba , Free-radioac ...
Photoluminescent gravel (mamirapiratra, endrika gravel) 1. Ho an'ny aquarium sy patchway 2. Mamirapiratra amin'ny maizina 3. Telo manjelatra amin'ny loko maizina avaiable 4. EN71 fankatoavana taratasy fahazoana 5. Ukany araka ny zavatra takinao feno: gravelum photoluminescent gravel, na Glazed photoluminescent Endri-pamoahana: Ampiasaina be amin'ny marbra artifisialy, Selidstone artifisialy, terrazzo, disk aquarium, bonsai, dobo filomanosana, haingon-trano, sns Manidina amin'ny haizina & ...
Vary boribory Photoluminescent (miramirana amin'ny vakana 3mm sy 5mm) Ny vatana rehetra manjelanjelatra loko telo misy loko izay misy ny Smart boribory bevava Fahatongavana ho tsara kokoa ary tsara kokoa ny fanoherana ny toetrandro, tsy mavesatra, ny haingo ny sahaza mety tsy misy fofona, ny fanadiovana ny hamafin'ny rano be, ny tontolo iainana, ny fanoherana ny hadisoana mivarotra teboka: Tsara endrika boribory, varahina feno mamirapiratra Fampahalalana feno ny jiro miorina amin'ny aloka boribory maizina Fampihaingoana Ganden, alàlana ...
Mamirapiratra amin'ny maizina (Gglazed, Pebble Pebble feno hatsaram-panahy)
Mamirapiratra amin'ny maizina & miharihary amin'ny maizinaVarious Mamirapiratra miloko: mavo-maitso, manga-maitso ary lanitra-manga sns .Smart Mahavariana ilay endrika kobanina, tsy misy famolavolana burr.
Ny vatokely miloko marevaka, antsoina koa hoe terrazzo marevaka, dia akaiky ny tena terrazzo. Tsy manana sisiny sy zorony izy ireo, ary azo hozimbany ny habeny. Ampiasaina kokoa kokoa izy ireo. Azo tsapain-tanana miaraka amin'ny vatam-paty mahazatra mahazatra izy ireo ary azo apetraka ao amin'ny fandroana tsy manimba trondro kely. Tsy misy poizina ary tsy manimba ny radioaktifa. Asaivo eken'ny manam-pahefana ny taratasy fanamarinana. Photobuminescent cobblestone (marevaka, endrika tsy matotra) Endrika: Mamirapiratra ao amin'ny maizina ...
Mamirapiratra amin'ny maizina & miharihary amin'ny maizinaVarious Mamirapiratra miloko: mavo-maitso, manga-maitso ary lanitra-manga sns .Mankalaza ny andro loko miloko fotsy, mavo, maitso, manga, mavokely sns.